HAMIGA HABLAHEENA YAA HOR ISTAAGA - Daryeel Magazine
HAMIGA HABLAHEENA YAA HOR ISTAAGA
Waxbarashada waan ku fiicanahay hablaha dariskuna way igu daydaan hankaygu xiddiguhu la jaar yahay. Wax aan sidaa ahaadaba oo aan sidaa ka sii fiicnado. waxa aan noqoday gashaanti u feedhanaysa guur iyo guri yagleelkii. Waxa aan sugayaa in aan helo mid igu habboon oo aan guursado ku dakeeyo kuna dego,.
Waxa aan ahaa gabadh han wayn, waxa aan jecelaa guusha, adduunkan iftinka badan ayaan doonayaa in aan wax ku soo kordhiyo. Waan quruxbadanahay oo qalbigaygu aad buu u iftiimayaa. Waxa aan ku hammiyaa hadafka aan leeyahay ee ugu waynina uu yahay in aan noqdo hooyo wanaagsan oo carruuta ay dhasho si wanaagsan u korisa ninkeedana raalliyo u noqota.
Aniga oo sidaasa ayuun buu ii yimi isaga oo aad u quruxbadan, uu labbisan yahay waxa uu raba gabadh uu la sheekaysto, waxa uu i tusay hillaac aad u heer sarreeya. Waxa uu ii sheegay in uu i jecel yahay doonayana in aan xaaskiisa noqdo. Qalbigayga ayuu si fudud u dhex galay uu i saaqay markaasu haddana dareenkayga baddalay. Wax kasta waan illaabay isaga ayuunbaa ii muuqda.
Habeen ayaannu ballanay si aanu u soo sheekaysanno, waxa uu ii sheegay in uu rabo in uu igala hadlo arrimihii guriga iyo guurka. Anigu sidaas ayaan filaayay, se sidii may noqon si kale ayay wax u dheceen.
Waxa na saddexeeyay shaydaan, wax uu ii sheekayaba waxa uu u dhacay hilbahaygii. Waakan igu riday xumaan. Goor danbe ayaan soo baraarugay oo aan is illaabay. Waan ooyay oo murugooday, ma garanaayo wax aan ku hadlo, waan niyad jabay waan naxdin ooyay, hankaygiina waan ka hadhay. Uu iskaga kay tagay markaasuu iga tagay uu i dayriyay oo uu dafiray waxa aanu yidhi aniga muu ahayn kii ku rabay. Waxa aan qaday uur, waxa uu igaga tagay dariiqa. Waxa aan haystaa Ilmo aan abbo lahayn. Bal eeg noloshaydii meeday hankaygii meeyay himiladaydii meeday.
Hadda xaaladdaydu waa dibad wareeg iyo dooxyada oo aan dul joogo. Bar bannaan baan taganahay Ilmahayguna mooyi sida uu ku danbayn. Dadku way i neceb yihiin oo ima soo dhaweeyaan aniguna waan necebahay.
Sidaa ayuu ii galay sidaana ragbaa ii galay. Raggu waa cadawga haween. Raggu waa waraabe
Habalahoow ragga iska jira, hanka aad leedahay ayuu cadaw ku yahay.
Qisadani aniga maaha, waxa aan ka turjumay hablo badan oo sidaasi ku dhacday. Dhibaatada sidan ahi way badan tahay ee taloow masuuliyadda yaa leh.
WQ: Nada Yuusuf Cumar
Yaa naafo ah?! Yaa Soo Diray Casumaadda? (QISO) Weydii Naftaada Ka Hor Intaadan Dooran Waxa Aad Doonayso Inaad Barato Isbedelka Niyada ee Caadada Ka Hor
14 Signs of Emotional Intelligence
It’s all too easy to lose control of our emotions. That’s why emotional intelligence (known …